Umbukiso Wemfundiso oweTech Fest Uphindela koBulawayo
iflyer eyohlelo olwe The TechFest
Lumbukiso ujonge ukulethela izakhamizi zakoBulawayo imfundiso epathelane lokusetshenziswa kwemitshina le ukuzithuthukisa ukuze kuguqule ukusebenza kwabakubhizimusi hatshi ezimbabwe kuphela kodwa ezwekazi lonke ele Africa kwelakusasa.
Lapho ubechasisa ukuthi kuloluhlelo, abe TechFest bazobe bexoxisana mayelana ngemitshina enjani, uNkosikazi Tatenda Mapfumo, oyisiphathamandla se The Tech Fest uthe, bazobe bekhangelele ukuxoxisana ngohlelo owenziwa yingwethi ezidabukela koBulawayo abasebenza ngemitshina eya macomputer ukuze basize umphakathini koBulawayo.
“Thina we are just trying to introduce technology & innovation to help, the already existing processes within companies that offer different services”
Abammeli abe The TechFest
uMapfumo uphinde wathi bakhangelele ukukwamukela abantu abakumisebenzi etshiyeneyo ngoba ngombono wakhe umsebenzi wonke usebenzisana ngemitshina eyamacomputer.
Inhlanganiso eye TechFest ikhangelele ukusiza osomabhizimusi abasakhulayo ngendlela ezinengi ezitshiyeneyo, enye yangukhona ibizwa community hacks, lapho abantu abazobe bekhona kuloluhlelo bazobe behlangana sebeyenza amaqembu ezosebenza lenkampani ebhekane lenkinga, bona sebezaveza isixazululo (come up with a solution) kulenkinga ebhekwe yinkimpani leyo.
Abafisa ukungena kuloluhlelo kumele bathinthe abenhlanganiso eye The Tech Fest kunombolo ezithi 0731 222 222 noma 0731 222 225.
Ingxoxo Phakathi KaMike Hove Lo Tatenda Mapfumo